“Sit in” tetsy Ambohidahy : nanatitra porofo tetsy amin’ny HCC indray ny depiote | NewsMada
“Sit in” tetsy Ambohidahy : nanatitra porofo tetsy amin’ny HCC indray ny depiote
Par Taratra sur 18/05/2018
Ora sisa isaina ? Nitohy teny amin’ny HCC Ambohidahy ny hetsika notarihin’ireo depiote ho an’ny fanovana, omaly. Mbola nanatitra ny porofo vaovao sy antontan-taratasy fanampiny momba ny tsy fananganan’ny filoha Rajaonarimampianina ny Fitsarana avo (HJC) izy ireo. Narahin’ny antso avo amin’ireo mpitsara sivy mianadahy izany. “Aoka ianareo tsy ho voaraviravy vola fa hijoro amin’ny fahamarinana. Vonona izahay ny hiaro anareo. Jereo tsara ny didy momba ilay fitoriana fampiatoana ny filoha am-perinasa. Henoy sy ekeo ary avohay ny fanonganana nataonay azy”, hoy izy ireo. Notsiahivin’ireto depiote ireo f a efa-taona nangirifiriana ny vahoaka, efa tonga ny fetra farany ka izao ny vokany. “Efa nisaotra anareo izahay ary mino fa mbola hisaotra anareo ny amin’ny didy manaraka hivoaka eo koa”, hoy ihany ny depiote ho an’ny fanovana. Tsiahivina fa efa nanatitra porofo tahaka izao izy ireo, herinandro lasa izay ary izao nanamafy izany indray. “Efa zava-dehive ny nilazan’ny HCC fa azo raisina ny fitoriana sy fitarainana… Miroso any amin’ny fandresena isika”, hoy ny depiote ho an’ ny fanovana.
Main’ny afo natsangany ny HVM
Naharitra ora iray latsaka ny hetsika natao teny Ambohidahy. Nihazo ny kianjan’ny 13 mey indray izy ireo notronin’ireo vahoaka marobe avy eo. Narahin’ny lahateny samihafa izany. Anisan’ny nivoitra ny valin-kafatra ho an’ireo parlemantera HVM nanao fanambarana, afakomaly. “Nandrehitra ny afo ianareo. Tsy matinareo intsony izany afo izany. Tsara sy mety aminareo ny mipetrapetraka satria tompon’antoka ianareo nanao io lalàm-pifidianana mampikorontana sy niteraka ra mandriaka sy fatiolona io”, hoy ihany izy ireo.
Fitsofana kiririoka sy fampanenoana sarom-bilany…
Hitohy, anio, indray ny hetsika ka mbola hiverina hanao « sit in » etsy amin’ny HCC Ambohidahy indray izy ireo. Hialohavan’ny fiaraha-mientana ho fitakiana ny fialan’ny filoha Rajaonarimampianina izany, amin’ny alalan’ny fitsofana kiririoka sy fampanenoana anjomara na sarom-bilany na koa anjombon’ny fiarakodia rehetra, anio amin’ny 12 ora. Araka izany, andrasana amin’izao faran’ny herinandro izao ny mety ho didy havoakan’ny HCC.